Federico Moccia: mabhuku | Zvazvino Zvinyorwa
Mufananidzo sosi yemabhuku aFederico Moccia: Pinterest
Taura nezve Federico Moccia uye mabhuku ake ndeokuita kubva kumunyori anga ari mutungamiri mukutengesa mabhuku evechidiki. Muchokwadi, zvinonzi ndezvekutenda kune nyaya dzavo kuti rudzi rwechidiki rwevakuru rwakamuka, madingindira evakuru asi akaudzwa nenzira yekuti pwere pachavo vaiziva nezvavo nenzira "yakapfava".
Kwemakore, Federico Moccia akazviitira mukurumbira pakati pevakuru, uye pese paakaburitsa bhuku zvave kubudirira, kwete munyika yake chete, asi munzvimbo zhinji dzepasirese. Asi mabhuku api ane Moccia? Ndeipi nyaya iri kuseri kwemunyori uyu? Tsvaga zvese pasi apa.
1 Federico Moccia ndiani
2 Mabhuku aFederico Moccia
2.1 Saga Mamita matatu kumusoro kwedenga
2.2 Saga Sorry kana ndakudaidza kuti rudo
2.3 Saga Manheru ano ndiudze kuti unondida
2.4 Saga Iyo nguva yekufara
2.5 Zvinyorwa zvekuzvimirira
Federico Moccia ndiani
Chinhu chekutanga chaunofanira kuziva pamusoro paFederico Moccia ndechokuti chido chake chechokwadi, mabhuku asati apinda muupenyu hwake, yaiva terevhizheni uye cinema. Uye hazvisi zvishoma, kana tikafunga kuti baba vake ndiGiuseppe Moccia, Pipolo, munyori wefirimu wefirimu neterevhizheni, wezvematongerwo enyika uye mutungamiriri wemafirimu akawanda nemitambo yeTV.
Zvose akararama hudiki hwake akakomberedzwa nebhaisikopo kuti baba vake vakaisa maari uye vakaratidza, saka, paakanga akura zvakakwana kuti ashande, akasarudza semugadziri wemifananidzo mumakodhi eItaly. Kunyanya, iwe unogona kuwana mareferensi kwaari mumafirimu kubva kuma70s uye 80s.
Akatanga kushanda semubatsiri kumutungamiriri weAttila flagello di Dio, firimu rababa vake.
Zvisinei, Makore mashanu gare gare akazvitangisa nebhaisikopo, Palla al centro. Dambudziko nderekuti kubudirira kwaive nababa vake hakuna kudzokororwa maari, uye firimu harina kucherechedzwa, zvekuti Federico Moccia akafunga kushandura cinema yeterevhizheni, chimwe chinhu chaaive atoita gore risati rapfuura, kwaakapinda semutambi. screenwriter mumwaka wekutanga weVakomana vechitatu. Muna 3 aive director uye scriptwriter weColegio uye uyu akabudirira zvishoma.
Nokudaro, akatanga kubatanidza terevhizheni, kunyora zvinyorwa zvezvirongwa zvakabudirira, uyewo bhaisikopo.
Uye kunyangwe zvakadaro, Federico Moccia akawana nguva yemabhuku ake. Maiva muna 1992 paakapedza kunyora Mamita matatu kumusoro kwedenga, rinova rikava bhuku rake rekutanga. Uye, sezvakaitika kuvanyori vakawanda, aive nematambudziko akakwana kuti chero muparidzi asarudze kuvimba naye. Saka akaita sarudzo yekuzviburitsa ega nemuparidzi mudiki. Mukati merudzi irworwo, bhuku harina kusimuka, uye Moccia akatarisisa nezvebasa rake nebhaisikopo, aine firimu reMixed class 3ª A. Zvakare haana kubudirira.
Akadzokera kuterevhizheni asi, muna 2004, aifanira kuisiya rini bhuku rake rekutanga rakatanga kubuda pachena mushure memakore gumi nemaviri ekudhindwa. Kureva kuti kubudirira kwakauya kwaari, chiri chiitiko muzvikoro zvesekondari zveRoma, uye kubva ipapo kushandurirwa mumitauro yakawanda uye kubudiswa munyika dzakasiyana dzakadai seEurope, Japan, Brazil ... gore iroro bhuku racho yakawanawo kuchinjirwa kwayo kubhaisikopo, kutanga ipapo, uye nekuwedzera kuwedzera riini.
Ehe, panguva iyoyo Federico Moccia akatendeukira kudivi rake rekunyora, uye akaedza rombo rake nerinovhero rechipiri, ndine chishuwo chako, inoteedzera bhuku rake rekutanga, uye nekubudirira kwakafanana neiyi, kugadzirisa kunosanganisirwa.
Aya mabhuku maviri aingova kutanga kwechiitiko cheMoccia, uye ndechekuti anotevera akabuda akakunda zvakare kusvika nhasi.
Mabhuku aFederico Moccia
Kana uchida kuverenga Federico Moccia mabhuku kuitira, saka pano tinovapindura kuti usarase chero chinhu. Ramba uchifunga kuti mazhinji acho anobva kumasagas, ndiko kuti, ane mashoma emabhuku maviri. Ipapo ane vamwe vakazvimirira, kunyangwe vasingazivikanwe zvakanyanya.
Saga Mamita matatu kumusoro kwedenga
Inoumbwa nemabhuku akati wandei: "Mamita matatu kumusoro kwedenga", "Ndinokuda", "Katatu iwe", "Babi neni".
Iyo yekupedzisira inyaya chaiyo, harisi ngano, asi inoenderana nenyaya nevatambi vanobuda musaga iri.
Iri bhuku rinotipa boka reshamwari, nehunhu hwadzo uye mafambiro adzo kubva mukuyaruka kusvika pakukura, vachiedza kutsvaga nzvimbo yavo munyika. Iwo ma protagonists anorarama nyaya yerudo mune yakachena Romeo uye Juliet maitiro, asi azvino.
Saga Sorry kana ndakudaidza kuti rudo
Yakagadzirwa nemabhuku maviri, "Sorry kana ndikakudana rudo" uye "Sorry asi ndinoda kukuroora." Yakanga iri imwe yebudiriro huru yemunyori uye chokwadi ndechekuti kune vazhinji zviri nani kupfuura zvinyorwa zvake zvekutanga.
Kune bhuku rechitatu, "Kutsvaga Nikki Neshungu", asi harina kushandurirwa muchiSpanish uye vateveri vesaga chete vanoziva nezvehuvepo hwayo.
Iyo nyaya inobata nerudo pakati pevaviri vane musiyano mukuru wezera uye zvipingamupinyi zvavanofanira kukunda kuti pakupedzisira vafare, zvese kushamwari, mhuri, nezvimwe.
Saga Manheru ano ndiudze kuti unondida
Yakagadzirwa nemabhuku maviri: "Ndiudze manheru ano kuti unondida" uye "Chiuru cheusiku pasina iwe."
Muchiitiko ichi, protagonist ndiye mukomana, Nicco, uyo achangobva kuraswa nemusikana wake uye uyo kamwe kamwe anosangana nevakadzi vechidiki vaviri veSpain avo vanotanga kunzwa chimwe chinhu chinopfuura kukwezva. Kusvikira vanyangarika.
Saga Iyo nguva yekufara
Zvakare inoumbwa nemabhuku maviri: "Iyo nguva yekufara" uye "Iwe, iwe chete."
Munovhero, anotisuma kune vatambi vaviri vanosiyana zvishoma kubva kune zvakajairwa, sezvo protagonist ari mumwe wevarume vakapfuma kwazvo pasirese uye musikana ari piano prodigy. Asi chimwe chinhu chinoitika chinoita kuti nzira dzedzose dzipesane.
Sezvatataura, pakati pemabhuku aFederico Moccia anewo mamwe akazvimirira, kureva kuti ane mavambo nemagumo. Izvi ndezvi:
The walk. Zvichida ndeimwe yemanovhero anoshamisa emunyori, sezvo isu tisina kujaira rejista iyi. Iri ibhuku pfupi raanofunga nezverufu rwababa vake.
Carolina anowira murudo. Iyo protagonist yenovel ane makore gumi nemana, musikana sevamwe. Kusvikira abatana neboka revasikana kuchikoro chesekondari uye mapato, kutsvoda, ushamwari uye tsika uye rudo rwechokwadi runotanga.
Wakamboverenga chero chinhu naFederico Moccia? Nderipi bhuku rawanyanya kufarira nezvemunyori? Tizivise!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku » Federico Moccia: mabhuku